Nke 126th Canton Fair
Na nnọchite PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, mmadụ ise n'ime ndị njikwa anyị gara ụbọchị ise Canton ngosi na Ọkt. 14th 2019 nnukwu nsonaazụ na ngosi a. Ndị ahịa gara ileta ngosi anyị bụ India, Thailand, Vietnam, Russia Syria, South Korea, Taiwan, Japan, Malaysia, Indonesia, Pakist ...
Automechanika Shanghai a maara dị ka Shanghai mba akpaaka akụkụ ngosi mmezi ule diagnostic ngwá ọrụ ọnọde ngosi, ọ bụ ndị kasị ibu ụgbọala mgbe-sales ọrụ ngosi na Asia, ọ bụkwa nke abụọ kasị ukwuu n'ụwa Automechanika ngosi ...
Ngwa ngwa ngwa! Ọhụrụ Graphene Griiz
PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, Dabere na ụlọ ọrụ nke anyị guzobere na 1988. Anyị nwere ahụmịpụta afọ iri abụọ na abụọ na afọ iri nke ahụmịhe na-arụ ọrụ karịa mba iri anọ na Asia, Africa, Europe na ahịa ụlọ ọrụ America. Anyị na-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin. Ọzọkwa ụgbọ okporo ígwè ...